Anatomy-ဆိုသည်မှာ ဇီဝဗေဒ ပညာရပ်အကိုင်းခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး သက်ရှိအရာများတွင်ရှိသောဖွဲ့စည်းပုံကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓာဗေဒ ဟုမြန်မာပြန်လျှင် သင့်လျှော်မည်။
Basic Anatomy အခြေခံ (အနာတော်မီ) ခန္ဓာဗေဒ
ခန္ဓဗေဒ စနစ် (၁ဝ) မျိုး
Physiology (ဇီဝကမ္မဗေဒ) ခန္ဓာကိုယ်အလုပ်များနှင့် သက်ရှိဖြစ်စဉ်
ဇီဝကမ္မအလုပ် (၁ဝ) မျိုး
Epithelial Tissue (အပီသီလီရယ်-တစ်ရှူး) အပေါ်ယံလွှာ တစ်ရှူး
Connective Tissue Membranes (ကွန်နက်တစ်-တစ်ရှူး) အလွှာ
Specialized connective tissues ထူးခြားသည့် (ကွန်နက်တစ်-တစ်ရှူး) များ
ဘေဆိုဖီးလ်၊ <၁%၊ Allergy (အလာဂျီ)ဖြစ်လျင် Histamine (ဟစ်စတမင်း)ထုတ်ပေးသည်။
လင်ဖိုဆိုက်၊ ၂၅%၊ B cells (အင်တီဘော်ဒီ) Antobody ထုတ်ပေးသည်။ T cells ခုခံအားကိစ္စတွင် ပါဝင်။ AIDS ဖြစ်လျင် ၎င်းနည်းသွား။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အခေါင်း (လှိုင်ခေါင်း) များ
1.	Skeletal System (စကယ်လတယ်-ဆစ်စတမ်) အရိုးစနစ်
Cranial Bones ဦးနှောက်အားဖုံးထားသည့်အရိုးများ
Auditory Ossicles နားနှင့်ပတ်သက်သည့်အရိုးများ
Thoracic Cage ရင်ခေါင်းအုံ
Lower Extremity ခြေထောက်ပိုင်းအရိုးများ
2.	Muscular System ကြွက်သားစနစ်
ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းပိုင်း ကြွက်သားများ = မျက်နှာအမူအရာ (အံ့ဩခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ဝမ်းသာခြင်း) တို့ကိုဖေါ်ပြရန် ကြွက်သားများ၊ အစာကို ဝါးရန်၊ မြိုရန်ကြွက်သားများ၊ လည်ပင်းအားငုံ့ရန်၊ မော့ရန်၊ ဘယ်-ညာလှည့်ရန်၊ ပတ်ခြာလှည့်ရန်ကြွက်သားများ ဖြစ်ကြသည်။
3.	Nervous System အာရုံကြောစနစ်
Organization of the nervous system အာရုံကြောစနစ် ဖွဲ့စည်းထားပုံ
Central nervous system (CNS) ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်
Peripheral nervous system (PNS) အဝေး-အပြင်ပိုင်း အာရုံကြောစနစ်
အင်ဒိုခရိုင်း စနစ်(Endocrine system)
Exocrine Glands (အိတ်ဆိုခရိုင်း-ဂလင်း) များ။ ။ ချွေးထွက်သော Sebaceous ဂလင်းများ၊ မင်မရီ-ဂလင်း(Mammary glands) နို့ထွက်သော ဂလင်းများ၊ အစာခြေရည်ထွက်သော ဂလင်းများ(Digestive enzymes)၊
အင်ဒိုခရိုင်း-ဂလင်း(Endocrine Glands) များ။ ။ ဟော်မုန်းများ ထုတ်ပေးသည်။ အာရုံကြောစနစ်နှင့် တွဲလျက် ခန္ဓာကိုယ်၏ အလုပ်များကို မျှတနေအောင်လုပ်ပေးသည်။
ပစ်ကျူထရီ (Pituitary Glands)။ ။ Anterior pituitary မှ ACTH, TSH, PRL, GH, Endorphins, FSH နှင့် LH ဟော်မုန်းများ၊ Posterior pituitary မှ Oxytocin နှင့် ADH ဟော်မုန်းများ ထုတ်ပေးသည်။
ပိုင်နီရယ်(Pineal Gland)ဂလင်းများ။ ။ မျိုးပွားခြင်းနှင့် ဇီဝအလုပ်များနှင့်ဆိုင်သည့် ဟော်မုန်းများ ထုတ်ပေး သည်။
သိုင်းရွိုက်(Thyroid Glands) ဂလင်းများ။ ။ လည်ပင်း၏ ရှေ့တွင်ရှိ၍ သွေးရွှင်သည့် အင်္ဂါတခုဖြစ်သည်။ ဘယ်-ညာ နှစ်ခုရှိသည်။ Thyroxine သိုင်ရောက်ဆင်း၊ Triiodothyronine ထွိုင်အိုင်အိုဒို-သိုင်ရိုနင် ခေါ် (အိုင်အိုဒင်း) ပါသည့် ဟော်မုန်းများ ထုတ်ပေးသည်။ (အိုင်အိုဒင်း) နည်းသည့်အခါ Goitre ခေါ် လည်ပင်းကြီးရောဂါ ရစေသည်။
ပါရာ-သိုင်းရွိုက်ဂလင်း(Parathyroid Gland)။ ။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းပေါ်၌ ပေါင်း(၄)ခုရှိသည်။ သွေးထဲမှ (ကယ်လ်စီယန်) အား ထိန်းပေးသည်။
အဒီနယ် (Adrenal Glands)ဂလင်းများ။ ။ ကျောက်ကပ်နှစ်ခု၏အပေါ်၌ရှိသည်။ Steroid စတီရွိုက်များ ထုတ်ပေးသည်။
ပန်ကရိယပ်စ်(Pancreas )ဂလင်းများ။ ။ သရက်ရွက်ဟုလည်းခေါ်သည်။ အစာအိမ်၏နောက်ဘက်တွင်ရှိပြီး Duodenum အူသိမ်၏ အစပိုင်း(စီ)ပုံအကွေးထဲမှစကာ Spleen ဘေလုံးအထိ ရှည်လျားသည်။ Insulin ခေါ် ဆီးချိုကို ထိန်းသည့် ဟော်မုန်း ထုတ်ပေးသည်။
တက်စ်တေ့စ် (Testes ) (ကျားအစေ့)။ ။Male sex hormones ကျားဟော်မုန်း Androgen (Testosterone) များ ထုတ်ပေးသည်။
အိုဗရီ(Ovaries) (မမျိုးဥအိမ်)။ ။ Estrogens (အီစထိုဂျင်) နှင့် Progesterone (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) ခေါ် မ-ဟော်မုန်းများ ထုတ်ပေးသည်။
အခြားဂလင်းများ (Other Endocrine Glands ။ ။ Thymus သိုင်းမတ်စ်။ Stomach အစာအိမ်၊ Small intestines အူသိမ်။ Placenta အချင်း၊ Heart နှလုံး။
5.	Cardiovascular System နှလုံး-သွေးကြောစနစ်
Valves of the Heart နှလုံး၏အဆို့ရှင်များ
နှလုံး၏ ညှစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လျော့ပေးခြင်း အလုပ်နှစ်မျိုး ပါဝင်သည့် ဖြစ်စဉ်တခုအား Cardiac Cycle ဟု ခေါ်သည်။ ညှစ်ထုတ်ခြင်းအဆင့်ကို Systolic phase ဟု၎င်း၊ ပြန်လျော့ပေးခြင်းအဆင့်ကို Diastolic phase ဟု ၎င်းခေါ်သည်။ ထို ဖြစ်စဉ်တပါတ်သည် (၀.၈) စက္ကန့် ကြာသည်။ ထို့ကြောင့် Blood preassure သွေးဖိအား တိုင်းသည့်အခါ အထက်သွေးချိန် ကို Systolic Pressure ဟု၎င်း၊ အောက်သွေးချိန်ကို Diastolic pressure ဟု ၎င်းခေါ်သည်။ BP = 110/80 mmHg
Heart Rate နှလုံးခုံနှုန်း
5.	Lymphatic System (လင့်ဖ်) သွေးပြန်ရည်စနစ်
(လင့်ဖ်) သွေးပြန်ရည်စနစ်သည် အလုပ်(၃)မျိုးလုပ်သည်။ (၁) အူထဲမှပိုလျံသည့်အရည်များအား သွေးထဲပြန်ဝင်စေသည်။ (၂) အဆီနှင့်အဆီတွင်ပျော်ဝင်သည့် ဗီတာမင်များအား စုပ်ယူပေးသည်။ (၃) ရောဂါရစေသည့်ပိုးများအား ခုခံတိုက်ဖျက် ပေးသည်။
Spleen (စပလင်း) ဘေလုံး
ဝမ်းဗိုက်၏ ဘယ်ဘက်အထက်ပိုင်း၊ (ဒိုင်ယာဖရမ်)၏ အောက်၊ အစာအိမ်၏ နောက်၌ ရှိသည့် အကြီးဆုံးသော (လင်ဖ်)အင်္ဂါ ဖြစ်သည်။ သွေးအား စစ်ပေးသည်။ ရောဂါပိုးဝင်လာလျင် (လင်ဖိုဆိုက်)များက တိုက်ပေးသည်။ အသဲနှင့်အတူတကွ အရွယ်လွန်သော။ သေသွားသော သွေးနီဥများကို ဖယ်ရှားပေး သည်။ သွေးကိုလည်း သိုလှောင်ထားပေးသည်။ ငှက်ဖျားရောဂါ နာတာရှည်ဖြစ်လျင် ဘေလုံးကြီးတတ်သည်။ Splenomegaly
Tounsils (တောင်ဆယ်) အာသီး
6.	Respiratory System အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်
7.	Digestive System အစာခြေစနစ်
အစာကို (ဆဲလ်)များက အသုံးပြုနိုင်သည့် (မော်လီကြူး) များအထိ ဖြစ်လာစေရန် အဆင့် (၆)မျိုးရှိသည်။ Ingestion အစာကို ပါးစပ်ထဲသွင်းခြင်း၊ •	Mechanical Digestion အစာကိုသေးငယ်သွားအောင် ဝါးခြင်း၊ ရောနှောခြင်း၊ ယင်းအလုပ်ကို (အင်ဇိုင်း) များက အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်စေသည်အထိ လုပ်ရသည်။ •	Chemical Digestion အစာထဲမှ (ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်)၊ (ပရိုတင်း) နှင့် အဆီတို့အား ရိုးရိုး (မော်လီကြူး) များ ဖြစ်လာစေရန် ဓါတုအစာချက်ခြင်း၊ •	Movements အစာအား ဝါးပြီးနောက် လှုပ်ရှားမှုဖြင့် အထက်ပိုင်းမှ အောက်ပိုင်းသို့ ဆင်းစေရသည်။ မြိုချခြင်းဟု ခေါ်သည်။ ပါးစပ်၊ အာခေါင်၊ အစာမြိုပြွန်၊ အစာအိမ်၊ အူသိမ်၊ အူမကြီး၊ အစာဟောင်းအိမ်၊ အစာနှင့် အစာခြေ ရည်များ၊ (အင်ဇိုင်း)များ ရောနှောကာ အစာအိမ်နှင့် အူတို့၏ကြွက်သားများ ရှုံ့ပေးခြင်းဖြင့် အထက်မှ အောက်သို့ ရွေ့လျားစေသည်။ ထိုသို့ စီးချက်ကျသကဲ့သို့ လှုပ်ရှားနေမှုကို Peristalsis (ပယ်ရီစတောလ်ဆစ်) ဟုခေါ်သည်။ •	Absorption (မော်လီကြူး) များသည် (ဆဲလ်) တို့က စုပ်ယူနိုင်သည့်အဆင့် ရောက်လာလျင် အူသိမ်၊ သွေး၊ (လင့်ဖ်) နံရံများကတဆင့် စုပ်ယူခြင်းလုပ်သည်။ •	Elimination အစာမခြေနိုင်သော၊ စုပ်မယူနိုင်သော (မော်လီကြူး)များအား စအိုမှတဆင့်စွန့်ထုတ်သည်။ ဝမ်းသွားသည် ဟုခေါ်သည်။
(Stomach) (စတားမတ်ခ်) အစာအိမ်
Small Intestine (စမောလ်-အင်တက်စတိန်း) အူသိမ်
Large intestine အူမကြီး
Liver (လစ်ဗာ) အသဲ
Gall bladder (ဂေါလ်-ဘလယ်ဒါ) သည်းခြေအိပ်
9.	Urinary System ဆီးလမ်းကြောင်းစနစ်
Urinary Bladder ဆီးအိမ်
10.	Reproductive System မျိုးပွားစနစ်
Male Reproductive System ကျား မျိုးပွားစနစ်
Female Reproductive System မ-မျိုးပွားစနစ်
External os (အိတ်စ်တာနယ်-အော့စ်) သားအိမ်ဝ၏ ထွက်ပေါက်
Mammary Glands (မင်မရီ-ဂလင်း) ရင်သား (နို့)